बडीगाड गाउपालिकाको टोल टोलमा नेकपाको टोल कमिटि गठन ! – ebaglung.com
२०७६ भाद्र ५, बिहीबार ०८:०४	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
कमल पौडेल, बडीगाड २०७६ भदौ ५ । बडीगाड गाउपालिकाको टोल टोलमा नेकपाको टोल कमिटी गठन गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ । यसै सिलसिलामा नेकपाले हिँजो बडीगाड गाउपालिकाको वडा नं २ जिमी, सक्न्यार र सिमलचौरमा एकै साथ टोल भेला आयोजना गरी टोल समिति गठन गरिएको हो ।
सक्न्यार तथा सिमलचौरको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश कमिटि सदस्य सुनिल शेरचनले पार्टी निर्माण र आगामी निर्वाचनलाई सफल पार्न सिंगो पार्टी पंक्ति जनपरिचलनमा जुट्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेकपाका बडीगाड गाउँकमिटि सदस्य ढालेन्द्र बन, विष्णुमाया अर्याल लगाएतले मन्तव्य राखेका थिए ।
टोल भेलाले झगरसिंह सलामीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यिय टोल समितिको गठन गरेको छ । जसको सचिवमा वालकृष्ण भुसाल लगाएत सदस्य रहेका छन् । कार्यक्रम खिम बहादुर पुनको अध्यक्षता, झगरसिंह सलामीको स्वागत मन्तव्य तथा लेखक पुनको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो।
त्यस्तै वडा नं. २ को जिमीमा सम्पन्न टोलभेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा जिल्ला कमिटि सदस्य विना थापाले पार्टी जनजिविकामा जोडिनुपर्ने बताईन । पार्टीमा लाग्नु भनेको सामाजिक सेवामा लाग्नु भएको भन्दै समाज विकासमा जोडिन सवै कार्यकर्तालाई उनको आग्रह थियो । कार्यक्रममा जिल्ला कमिटि सदस्य ढालेन्द्र शेरचन, गाउँकमिट सदस्य रगुनन्द गिरि लगाएतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
भेलाले दधिकला बनको संयोजकत्वमा २७ सदस्यिय टोल कमिटिको गठन गरेको छ । जसको सचिवमा शोभा थापा, सहसचिवमा लुस्मा विक लगाएत रहेका छन् ।
त्यस्तै भेलाले छम बहादुर थापाका संयोजकत्वमा ५ सदस्यिय सल्लाहकार समितिको समेत गठन गरेको छ। जसको सदस्यमा मानसिंह विक, तिला बन, शोभाखर पोखरेल र पूर्णकलि बन रहेका छन। त्यस्तै भेलाले धनमाया पोखरेलको संयोजकत्वमा १५ सदस्यिय अखिल नेपाल महिला संघको टोल कमिटिको गठन गरेको छ। जसको सचिवमा दुर्गी विक र सहसचिवमा शान्ति राना लगाएत रहेका छन् । भेला वडा संगठन कमिटिका अध्यक्ष खगिश्वर अर्यालको अध्यक्षता, वडा सदस्य रुके पुरीको स्वागत मन्तव्य तथा तेजिन्द्र घर्तिको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो।
त्यस्तै वडा नं. २ को सिमलचौरमा भएको भेलामा प्रदेश कमिटि सदस्य सुनिल शेरचन, जिल्ला कमिटि सदस्य ढालेन्द्र शेरचन, पूर्व जिल्ला निर्वाचन कमिटि सदस्य प्रमोद शर्मा लगाएतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । भेलाले सञ्जय पोखरेलको संयोजकत्वमा ३१ सदस्यीय टोल संगठन कमिटिको गठन गरेको छ। जसको उपसंयोजकमा इन्द्रकला पाण्डे, सचिवमा वुद्ध पौडेल लगाएत रहेका छन् ।
त्यस्तै अनिता रानाको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय अखिल नेपाल महिला संघ टोल कमिटिको गठन गरेको छ। कार्यक्रम टोल कमिटि संयोजक संजय पोखरेलको अध्यक्षता, गाउँकमिटि सदस्य विष्णुमाया अर्यालको स्वागत मन्तव्य तथा सचिव बुद्ध पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो।